Filtrer les éléments par date : dimanche, 28 février 2021
Pilo kely : Afaka tsy akana amin'ny hetra aloan'i Malagasy ve ny karaman'ireto olom-boatendry miantsy ady lava ireto.
Ianareo olom-boatendry anie misolo tena ny Malagasy rehetra e, ny karamanareo aloan'i Malagasy rehetra fa tsy ny mpomba anareo irery no miantoka ny karamanareo, tena mampandoa mihitsy mahita ny fihetsikareo miantsy ady sy manao taim-bava etsy sy eroa.
Tsy mendrika anao sy ny hasina anananao amin'ny maha Filoham-pirenena ho an'ny Malagasy rehetra anao ireo olona ireo andriamatoa Filoha.
Ireo no hitarika ny tsy hitiavan'ny maro anao.
dimanche, 28 février 2021 19:22
Sigara sy paraky : Mamono Malagasy 8️ 3️0️0 isan-taona
Tena mamono olona maro eto Madagasikara, nefa tsinontsinoavin’ny olona ny aretina ateraky ny fifohana sigara sy ny fihinanana paraky.
Araka ny atontanisa navoakan’ny OMS Madagascar ️dia Malagasy 8 3️0️0 isan-taona eo no maty vokatr’ireo. Fahatapahan’ny lalandra, homamiadan’ny havokavoka na aretin’ny taovam-pisefoana ho an’ny olon-dehibe. Miteraka zaza saozanina ho an’ny vehivavy bevohoka ary koa zaza maty tampoka.
Ny 2️7️ febroary 2️0️0️5️ i Madagasikara no nankatoa ny fifanarahana ara-pahasalamana, miaraka amin’ny OMS iadiana amin’ny voka-dratsin’ny fifohana sigara sy ny fihinanana paraky.
dimanche, 28 février 2021 19:21
Mpiadina ho Polisy : Tovolahy iray nanao dia an-tongotra Maintirano-Antananarivo hiatrika fanadinana
Tovolahy iray isan’ireo mpandray anjara amin’ny fifaninanana handraisana mpianatra ho Polisy izay tontosaina ny 27 sy 28 febroary 2021 no nandeha an-tongotra niala avy any Maintirano, Faritra Melaky, ny Alatsinainy 22 Febroary 2021 hamonjy ny foibe fanadinana aty Antananarivo ka nigadona teo amin’ny LMA Ampefiloha ny marainan’ny andro iatrehana fanadinana, ary avy hatrany dia nanatona ny foibe fanadinana niatrika ny taranja natao maraina.
Tonga nanolotra vatsy ho azy sy ho fanampiana azy mandritra ny fotoana hivahinianany eto Antananarivo ny Minisitry ny Filaminam-bahoaka, ny Contrôleur Général de Police Randrianarison Fanomezantsoa sady nijery ifotony ny fizotry ny fifaninanana.
Nandritra ny fitsidihana nataon’ny Minisitra tao amin’ny LMA Ampefiloha no tonga ilay Tovolahy avy any Maintirano.
dimanche, 28 février 2021 13:33
Burkina Faso : Manomboka voavaha ny olan'ny rano an-drenivohitra
République de Haute Volta teo aloha no lasa Burkina Faso ankehitriny, na koa azo adika hoe « Pays des Hommes intègres », firenena afrikanina tandrefana, tsy misy ranomasina, avaratra andrefan'i Bénin, atsimon'i Mali, avaratry Côte d'Ivoire sy Ghana, manana mponina 20 tapitrisa eo (2018).
273 800km² ny habeany (atsasany latsaka amin'i Madagasikara 587 000km² ny tany, ary 1 200 000km² miaraka amin'ny ranomasina ZEE), zanatany frantsay, nahazo ny fahaleovan-tenany ny 05 aogaositra 1960, novaina ho Burkina Faso ilay anarana Haute Volta ny 04 aogostra 1984 tamin'ny andron'ny Revolisionera Thomas Sankara.
Fitondrana régime preésidentiel i Burkina, Ny Filoham-pirenena no filoham-panjakana sady lehiben'ny governemanta.
715.12 $USD ny harikarena isam-batan'olona, amin'ny fitombon'ny harikarena faobe 6.8% ny taona 2018.
Tsy manana harena ambanin'ny tany firy izy ankoatran'ny volamena, fa 80% n'ny harenany dia ny fambolena sy fiompiana izay hifaharan'ny fandrosoany. Mitana ny laharana 144 izy amin'ny firenena 157 maneran-tany. Eo amin'ny 40.1% n'ny mponina no ambanin'ny taham-pahantrana.
dimanche, 28 février 2021 12:13
28 février : Journée mondiale sans Facebook.
dimanche, 28 février 2021 12:11
28 février : Journée internationale des maladies rares.
dimanche, 28 février 2021 12:05
Olona ianjadian’ny tsy fanjarian-tsakafo : Kaominina 15 amin’ny 18 no efa nanaovana fanisana
Miroso ny fanisana ireo olona ianjadian’ny tsy fanjarian-tsakafo aty amin’ny faritra atsimon’ny Nosy. Asa ataon’ireo miaramilan’ny BMM3.
Kaominina 15 amin’ny 18 ao amin’ny distrikan’Amboasary Atsimo no efa vita fanisana.
Mitohy kosa izany ho an’ny Kaominina Sampona, Tsivory ary Ebelo.
dimanche, 28 février 2021 12:00
Nosy tanikely- Dzamanjary : Vazaha lahy frantsay iray maty niandrika
Vazaha lahy iray, “plongeur", teratany frantsay fantatra amin’ny anarana hoe Onno Morgan, 52 taona, no hita faty tao Nosy Tanikely Fokontany Ambatoloaka Boriborintany Dzamanjary, Distrika Nosy Be ny 26 febroary 2021.
Telo lahy izy ireo no niandriaka, nitaingina sambokely haingam-pandeha. Ratra anaty tany amin’ny lohany no voalazan’ny mpitsabo nanao ny fanamarinana teo anatrehan’ny zandary fa nitarika ny fahafatesan’ity teratany frantsay ity.
Nanatrika izany fizahana ny faty izany ny Consul honoraire frantsay ao Nosy Be.
Ivato Centre – Ambositra : Voasambotra ireo jiolahy roa mpanao fanafihana mitam-basy
Taratasy avy amin’ny Fitsarana nahafahan’ny zandary avy amin’ny kaompania ao Ambosira nisava tokantranon’olona ahiahiana ho mpanao fanafihana mitam-basy ka efa narahi-maso tao Ambalandapa Fokontany Ankaramainty Kaominina Ivato Centre Distrika Ambositra ny 24 febroary 2021.
Sarona nandritra izany ny basy vita gasy sy entana halatra maromaro. Nisy lehilahy roa ihany koa voasambotra ary notanana avy hatrany nanaovana famotorana.